Tokony eo amin'ny Pinterest ve ny orinasanao? | Martech Zone
Tokony eo amin'ny Pinterest ve ny orinasanao?
Talata, Aogositra 6, 2013 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Ity hazo fanapaha-kevitra avy amin'ny Zoom Creates Blogs ity dia fitaovana lehibe hanapahan'ny orinasa manapa-kevitra raha manana angovo na tsia izy ireo ary tokony hampiasa fotoana sy hery amin'ny fananganana Pinterest paikady. Izy io dia infographic tsara tarehy ary tena azo ampiharina. Raha manapa-kevitra ny orinasanao tsy hamolavola ny paikadin'ny Pinterest azy manokana, na izany aza, tsy midika izany fa tsy afaka manao piggyback amin'ny tabilaon'ny olon-kafa ianao! Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia manohana sy miasa amin'ireo mpandraharaha ao amin'ny birao Pinterest mba hizara vaovao ary tena mahafinaritra izany.
Toy ny tranokala media sosialy rehetra, zava-dehibe ny manabe ny tenanao amin'ny lampihazo, mianatra ny zavatra tafiditra amin'ny maha-mpikambana mavitrika anao sy ny fotoana mety hitahirizanao ny mombamomba anao. Tsy ny orinasa rehetra no mety amin'ny Pinterest. Tokony ho hitanao raha mifanaraka amin'ny tranokala ny tolotra omenao sy ny fahaizanao ary manangana paikady matanjaka alohan'ny hanaovanao ny dingana. Ny fidirana amin'ny tranonkala media sosialy dia mitaky fotoana, ezaka ary, raha ny Pinterest, sary mahafinaritra sy atiny lehibe. Noho izany, vonona ny hanao ny fanoloran-tena ve ny orinasanao?
Mamorona bilaogy ny Zoom manontany sy manome antsipiriany ny valin'ny fanontaniana lehibe efatra rehefa manapa-kevitra raha tokony hampiasa vola amin'ny fisian'ny Pinterest ny orinasanao?
Afaka mijanona ho mavitrika amin'ny Pinterest ve ianao?
Manana sary mahasarika maso ve ianao, sa azonao atao ny mamorona azy?
Mampiasa Pinterest ve ny mpihaino kendrenao?
Manana zavatra zaraina bebe kokoa noho izay ataonao ve ianao?
Raha manapa-kevitra ny handroso ianao dia tena manoro hevitra aho Karen LelandBoky Torolàlana farany ho an'ny Pinterest ho an'ny orinasa. Nandefa kopia taminay i Karen ary - eny - izany no rohy mpiara-miasa aminay.
Tags: PinterestMarketing amin'ny Pinterestpaikady pinterest
Revolve Camera: Rafitra Dolly ho an'ny iPhone na DSLR
Aug 6, 2013 amin'ny 10: 46 AM
Misaotra betsaka tamin'ny famakiana ny lahatsoratray hoe "Tokony eo amin'ny Pinterest ny orinasanao" ary mizara ny sary miaraka amin'ny mpamaky anao.
Aug 16, 2013 amin'ny 10: 37 AM
Hi. Ahoana no fomba hanampiako torohevitra sy fitaovana manentana amin'ny Pinterest raha tsy manam-potoana / fahaizana sary aho hamoronana infografia?
Aug 16, 2013 amin'ny 11: 47 AM
Ny infografika dia ampahany kely amin'ny lazan'ny Pinterest…. sary misongadina kokoa noho ny zavatra rehetra. Manomboha amin'ny fampiasana tranokala toy ny Deposit Photos hahitana sary mahafinaritra sasany izay tsy lafo - http://www.depositphotos.com (mpanohana anay) - avy eo apetaho ireo toro-hevitra na fitaovana manentana anao ao anaty tontolo mahafinaritra!
Aug 17, 2013 amin'ny 8: 12 AM
Satria tsy nanova ny mpanaraka ny Pinterest ho mpanjifa aho (raha ny fahalalako azy) dia tsy sahy mandany vola amin'izany aho. Saingy tena horaisiko io torohevitra io. Misaotra.
Aug 17, 2013 amin'ny 9: 28 AM
Mazava ho azy, tsara raha manana an'io rohy mivantana amin'ny fiovam-po io. Indraindray ireo fanazaran-tena ireo dia momba ny marika sy ny fahefana. Vahoaka marobe miaraka amin'ny fanarahana be dia be ao amin'ny Pinterest dia hita ho mpitarika indostria sy loharano azo antoka - zavatra tokony ho ao an-tsaina. Sambatra Pinning! 🙂